ဓမ္မဟေ၀န် - ဓမ္မတရား သြ၀ါဒများ
သို့ပွားစေမှ နိဗ္ဗာန်ရ မုချငြိမ်းအေးမှာ။
ထွဋ်ခေါင် ဆရာတော် သြ၀ါဒ
တောင်ပုလု ဆရာတော်၏ သြ၀ါဒ-
မဟာစည် ဆရာတော် သြ၀ါဒ---
ပထမ ရွှေကျင်ဆရာတော် သြ၀ါဒ
စွန်းလွန်း ဆရာတော်ကြီး သြ၀ါဒ
ထိမှု သိမှု ထိုနှစ်ခု သတိကြပ်ကြပ်ပြု၊
၀န်းသိုခန္တီး ဆရာတော် သြ၀ါဒ-
သပြေကန် ဆရာတော် သြ၀ါဒ-
ဥပနီယတိ လောကော အဓုဝေါ။
ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာ၊ မရှိပါခဲ့၊ ဥစ္စာဟူသရွေ့၊
တစ်နေ့ကျကာ၊ တို့သူငါ၊ စွန့်ခွာသွားရမှာတကား။
တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ-၏ သြ၀ါဒ
အရှင်ဇ၀နတရားများ, ဩ၀ါဒများ March 3rd, 2009
မီးလုံးကြီးတစ်လုံး နောက်ကနေ လိုက်နေတယ်ဆိုပြီး ကြောက်ကြောက်လန်.လန်.နဲ. မရပ်မနား ထွက်ပြေးနေခဲ့တယ်၊ အမှန်တော့ ကိုယ်သွားရာလမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါလား ဆိုတာကို နောက်မှသိရတယ်။
အဆိုးတစ်ခုကို တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်မှတ်ဥာဏ်က သဘောချင်းတူတဲ့ နောက်ထပ်အဆိုးတွေကိုပါ ပြန်ဖော်ပေးတယ်၊ အကောင်းတစ်ခုကို တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်အကောင်းတွေကို ပြန်ဖော်ပေးတယ်၊ အဆိုးကို များများတွေးလေလေ အဆိုးတွေက ပွားလေပဲ၊ အကောင်းကို များများတွေးလေလေ အကောင်းတွေကပွားလေပဲ၊ ဘယ်ဟာ တွက်ခြေကိုက်သလဲ။
ဒုက္ခဆိုတာ ကိုယ်သွားနေတဲ့လမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေတာပါ။
အနိုင်ရနေမှ နေသာထိုင်သာ ဖြစ်တဲ့သူဟာ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ တော်တော်ပျော့ညံ့တဲ့သူပဲ၊ စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးမားတဲ့သူဟာ သူများကို အနိုင်မကျင့်ဘူး။
ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးတာ၊ ရာထူးဆုံးရှုံးတာဟာ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှု မဟုတ်သေးဘူး၊ ကိုယ့်ရင်ထဲက အမြင့်မြတ်ဆုံးစိတ်ထား ဆုံးရှုံးသွားတာကမှ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူဟာ အကောင်းမြင်တက်တဲ့ သဘောရှိလို. ဘယ်သူကိုမဆို ကောင်းတယ်၊တော်တယ်လို. မြင်တယ်၊ စိတ်မချမ်းသာတဲ့သူဟာ လူတွေကို အကောင်းမမြင်ဘူး၊ အထင်သေးတယ်၊ မယုံဘူး၊ စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူဟာ သူများကို အနိုင်ကျင့်ချင်တယ်၊ သူများကို နိုင်လိုက်ရရင် သူနည်းနည်း နေသာထိုင်သာရှိသွားတယ်လို. ထင်တယ်၊ စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူဟာ သူများကို မနှိမ်ချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ညှာတာတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ တွေ.ကြုံရသမျှ အတွေ.အကြုံတွေဟာ လောကကြီးအကြောင်းနဲ. ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြောပြနေပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြင်ပပစ္စည်းတွေထက် ကိုယ့်ရင်ထဲက သဘောထားက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
သူတစ်ပါးရဲ. ပျော်ရွှင်မှု၊ အောင်မြင်မှု၊ တိုးတက်မှုအတွက် ၀မ်းသာနိုင်တာဟာ ကိုယ့်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် လေးစားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုဟာ ကိုယ့်ဘ၀ တိုးတက်ရေးမှာ အရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တယ်။
ငါ့ကို ဒုက္ခပေးတဲ့သူကို ငါခွင့်လွတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ. လက်စားချေလိုက်တာပဲ။
လူတစ်ယောက်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိချင်ရင် သူဒုက္ခရောက်တုန်းမှာ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကို ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ.ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်က ကိုယ့်ဘ၀ကို ကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။
လကွယ်မရှိရင် လပြည့်ညဟာ ပျော်စရာသိပ်ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်စိတ်ထားနဲ. ကိုယ့်လုပ်ပုံကိုင်ပုံ မပြောင်းနိုင်ရင် ကိုယ်တွေ.နေကျ အခက်အခဲကို တွေ.နေအုံးမှာပဲ။
ကိုယ့်မိတ်ဆွေကို တကယ်ခင်တယ်ဆိုရင် သူ.မှာ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက် တိုးလာအောင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေ နောက်တစ်ယောက်နဲ. မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြှင့်ချင်ရင် သူများကိုလည်း မြှင့်ပေးပါ၊ သူများကို မြှင့်ပေးလေလေ ကိုယ်လည်း မြင့်သွားလေလေ။
ကိုယ့်သဘောထားက ကိုယ့်အပြုအမှုကို လွှမ်းမိုးတယ်၊ ကိုယ့်အပြုအမှုက ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကို လွှမ်းမိုးတယ်။
လူတိုင်းကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ.ကိုယ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တကယ်အကျိုးပြုရင် ကိုယ်ကျိုးဆိုတာ မတောင့်တပဲပြည့်ပါတယ်။
အမှားထဲက သင်ခန်းစာမယူတာကမှ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အမှားဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့သူဟာ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ စကားကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောဘူး၊ ကိုယ့်စကားကိုကိုယ် တန်ဖိုးမထားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးမထားရာ ရောက်တယ်။
တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ အမှုအရာဟာ ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိတယ်။
ကိုယ့်အခက်အခဲ ကိုယ့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို. နည်းလမ်းရှာတဲ့အခါမှာ အများအတွက် အဆင်ပြေဖို.ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှ ရေရှည်ပြေလည်တဲ့ အဖြေကိုရမယ်။
စိတ်ဓာတ်အင်အား ပျော့ညံ့တဲ့သူဟာ စစ်မှန်တဲ့သတ္တိ မရှိတဲ့သူဟာ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ကျင့်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။
အသိဥာဏ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားလေလေ လေးစားမှု အသိအမှတ်ပြုမှုကို တန်ဖိုးထားလေလေပါပဲ။
သူတစ်ပါးရဲ. အလိုဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ရတာ ကိုယ့်မှာ ရှုံးသွားတာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်ရဲ.သဘောထားကြီးမှု ကိုယ့်ရဲ.မြင့်မြတ်မှုကို ပိုပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရတာ၊ သိပ်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးကို လိုက်လျောရတာဟာ ရှုံးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်၊ အမှန်တော့ မြတ်တာပါ။
လိုချင်တာရတာမရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးး စိတ်လှုပ်ရှားမှုသိပ်မဖြစ်ပဲ၊ လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်နိုင်တဲ့သူ စိတ်မပျက်တဲ့သူက ရေရှည်မှာလိုချင်တာ ပိုရမယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သိမ်ငယ်တဲ့စိတ်မရှိရင် သူများထက်သာကြောင်းပြောနေဖို့ မလိုဘူး၊ ကိုယ့်ကိုကိုအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ လူတယောက်လို့ မှန်မှန်ကန်ကန် မခံစားရတဲ့ သူကသာ လူကြွားကြီးဖြစ်လာတာ။
ငွေနဲ့ ကြွားတဲ့သူ အိမ်နဲ့ ကြွားတဲ့သူ ကားနဲ့ ကြွားတဲ့သူ ပစ္စည်းနဲ့ ကြွားတဲ့သူ စိန်တွေရွှေတွေနဲ့ ကြွားတဲ့သူဟာ တကယ်ချမ်းသာတာ မဟုတ်သေးဘူး။ တကယ်ချမ်းသာတဲ့ သူဟာ သူချမ်းသာတာကိုမေ့ထားလို့ ရသွားပြီ။ ပြည့်စုံနေတဲ့ စိတ်ရှိနေတဲ့သူဟာ သူပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုမေ့ထား လိုက်ပြီ။
ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ လူသိစေချင်တဲ့ စိတ်အားကြီးနေရင်လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ တကယ်ကောင်းတဲ့သူဟာ ငါကောင်းတယ်လို.တောင် မတွေမိဘူး။
ကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ကြားမှာ ပြုံးပြုံးလေးနေရတာ ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး၊ အဲဒါရင်ကျက်မှုမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကောင်းတာပြောတဲ့ အခါလည်းရှိ အဆိုးပြောတဲ့အခါလည်းရှိတယ်။ ချီးမွမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ ခြင်းဆိုတာ လောကဓမ္မာတာပဲ၊ အထိုက်အလျောက်ခံနိုင်ရည်ရှိကို ရှိမှဖြစ်မယ်။ လုံးဝအပြောမခံနိုင်ရင်လောကကြီးမှာနေလို့မဖြစ်ဘူး။
သူ့ကိုဂုဏ်သိက္ခာကျသွားအောင် ပြောမယ်ဆိုရင် သူ့ကိုမပြောခင်မှာငါက အရင်ဆုံး ဂုဏ်သိက္ခာကျသွားပြီ
သူများအပြစ်ကိုများများရှာပြောနေတဲ့သူဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကိုချတာပဲ။
ငါသူများကို အများကြီးဂုဏ်သိက္ခာကျတဲ့ စကားတွေပြောရင် သူဂုဏ်သိက္ခာကျသွားလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့ နော်၊ သူဂုဏ်သိက္ခာကျဖို့ ကမသေချာဘူး..ကိုယ်ဂုဏ်သိက္ခာကျဖို့ ကပိုသေချာတယ်။
ပရိယာယ်မသုံးပဲနဲ့ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံတာဟာ လူတယောက်ကို ကိုယ့်ကပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တခု ဖြစ်တယ်။
သူများကိုဘယ်လိုလူစားလို့ ပြောနေတာဟာ ကိုယ့်ကိုကို ဘယ်လိုလူစားလို့ဖော်ပြနေတာနဲ့ တူတယ်။
ချုပ်ချယ်ချင်တာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု မရှိတဲ့သူ သူတပါးအပေါ်မှာလည်း ယုံကြည်စိတ်ချမှု မရှိတဲ့သူတွေ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူဖြစ်တယ်။
Today, there have been2visitors (6 hits) on this page!	မြတ်ဗုဒ္ဓတရားတော်များ ပြန့်ပွားရေးအတွက် အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို ကူးယူနိုင်ကြပါသည်